လွယ်အိတ်ကလေး - Dr Mg Nyo [အပြာစာပေ]
ကိုကိုမောင် (၇) တန်း အောင်တော့ သူ့ဦးလေးရှိရာ မန္တလေး စိန်ပန်းရပ်သို့ ရောက်လာ၏။ စောစောကတော့ ကျောင်းဆက်တက်ရန် စိတ်ကူးမရှိခဲ့။ ဦးလေးဖြစ်သူ ကိုမြင့်ဟန်က ကျောင်းဆက်ထားဖို့ တာဝန်ယူသဖြင့် သူ့အမေ မခင်ဝင်းက သဘောတူလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။
ဦးလေးဖြစ်သူ ကိုမြင့်ဟန် မှာ သံရေကျိုလုပ်ငန်းဖြင့် ကြီးပွားနေ၏။ အလုပ်ရုံက သတ်သတ်၊ အိမ်က သတ်သတ်ဖြစ်သည်။ ကိုကိုမောင်ကို မန္တလေးသို့ ပို့ခြင်းမှာ ကျောင်းဆက်ထားဖို့ မဟုတ်ဘဲ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း အလုပ်တစ်ခု သင်ကြားရန်ဖြစ်သည်။ ဒီရောက်မှ အစီအ စဉ်တွေ ပြောင်းကုန်ခြင်းဖြစ်၏။
ကိုမြင့်ဟန် မိန်းမ မနှင်းရီ က ငွေကုန်မည့် ကိစ္စမို့ သိပ်တော့ မကျေနပ်။ သို့သော် ကိုမြင့်ဟန်ကို ကြောက်ရသည့်အတွက် အောင့်သက်သက်နှင့် နေလိုက်ရသည်။ ကိုကိုမောင်ကလည်း သူ့ဦးလေး မိန်းမ မကျေနပ်မှန်း ရိပ်မိသည်။ ထို့ကြောင့် မနှင်းရီ နှင့် အဆင်ပြေအောင် ပေါင်းရမည်ကို နားလည် လိုက်သည်။
ကျောင်းဖွင့်ဖို့က တစ်လခွဲလောက် လိုသေး၏။ ထို့ကြောင့် အလုပ်ရုံနှင့်အိမ် ကူးချည်သန်းချည်လုပ်ကာ မနှင်းရီ တာဝန်များကို ဝိုင်းကူလုပ်ပေးသည်။ မပျင်းမရိ မခိုမကပ် လုပ်ကိုင်ပေးတတ်သဖြင့် တစ်ပတ်အတွင်း မနှင်းရီက သူ့ကို သဘောကျသွားသည်။ မနှင်းရီက အိမ်ဆိုင်ဖွင့်ထားသည်ဖြစ်ရာ လိုအပ်သော ပစ္စည်းများကို ဈေးချိုသို့ သွားဝယ်ပေးရသည်။
ကိုကိုမောင် မရောက်ခင်က ဖတ်ဖတ်မောအောင် လုပ်ခဲ့ရသော မနှင်းရီ တစ်ယောက် ယခုတော့ တဝက်မက သက်သာနေသဖြင့် ကိုကိုမောင့်အပေါ် သဘောကျ ကြည်ဖြူနေသည်။ ကိုကိုမောင် လုပ်ကိုင်ပေးသမျှကို လုပ်အားခဟု သဘောထားကာ ကျောင်းမုန့်ဖိုးအဖြစ် ယခုကတည်းက စုပေးထား၏။
ဦးလေးဖြစ်သူ ကိုမြင့်ဟန်မှာ မနက်မိုးလင်းသည်နှင့် အလုပ်ရုံထွက်သည်။ ည မိုးချုပ်မှ ပြန်လာလေ့ရှိ သည်။ များသောအားဖြင့် ည ကိုးနာရီခွဲ ဆယ်နာရီမှ ပြန်လာလေ့ရှိသည်။ သည်တော့ ကိုကိုမောင် တစ်ယောက် မနှင်းရီအတွက် အကောင်းဆုံး ကူဖော်လောင်ဖက် ဖြစ်လာသည်။ ပြီးတော့ သူတို့မှာ သားသမီးမထွန်းကားသဖြင့် ကိုကိုမောင်ကို သားတစ်ယောက်သဖွယ် သဘောထား ဆက်ဆံလာသည်။
ကျောင်းစဖွင့်သည့်နေ့က မနှင်းရီကိုယ်တိုင် ကျောင်းလိုက်အပ်သည်။ မနှင်းရီက သူနှင့်ရင်းနှီးသော ကေသွယ်မိုး နှင့် ကိုကိုမောင်ကို မိတ်ဆက်ပေးပြီး လိုအပ်သော အကူအညီများပေးရန် အတန်တန်မှာခဲ့၏။ ကေသွယ်မိုးကလည်း (၇)တန်းအောင် (၈)တန်းတက်ရမည့်သူ ဖြစ်ရာ တောသားလေး ကိုကိုမောင်အဖို့ အစစအရာရာ အဆင်ပြေသွားသည်။
မနှင်းရီက အပြန်တွင် ကေသွယ်မိုးကိုပါ မုန့်ဖိုးငါးရာပေးခဲ့ သည်။ (မှတ်ချက်။ ။ ထိုစဉ်က ဆန်တစ်ပြည် (၁၂၅) ကျပ် ခန့်သာရှိသေးသည်။) ကိုကိုမောင့်ကို အကြောင်းပြု၍ မုန့်ဖိုးငါးရာ ရသဖြင့် ကေသွယ်မိုး တစ်ယောက် ကိုကိုမောင့်အပေါ် ငယ်ပေါင်းသဖွယ် ခင်မင်ရင်းနှီးသွားသည်။
လိုအပ်သည့် အကူအညီများကို စေတနာ ထက်သန်စွာ အကူအညီပေးသည်။ နောင်လည်း ရလာဦးမည့် အခွင့်အရေးများကို မျှော်မြင်ကာ ကိုကိုမောင်ကို သူ့လူအဖြစ် သတ်မှတ် လိုက်တော့၏။ထိုနေ့မှစ၍ သူတို့နှစ်ယောက်မှာ သွားအတူ စားအတူ တပူးတွဲတွဲဖြစ်ခဲ့ကြသည်။
တက္ကသိုလ်ရောက်တော့လည်း အတူတူပင် ကေသွယ်မိုး မိဘများက သာမန်လက်လုပ်လက်စားတွေမို့ စားနိုင်သောက်နိုင်ရုံသာ ရှိကြ၏။ ကေသွယ်မိုး အဖေက မြင်းလှည်းမောင်း သည်။ ကိုကိုမောင့် ဦးလေး အလုပ်ရုံက ပစ္စည်းများကို ကေသွယ်မိုး အဖေကပင် ဒိုင်ခံသယ်ပို့ပေးရ၏။
ကေသွယ်မိုး အမေကတော့ ကမ်း နားဈေးမှာ ကုန်စိမ်းရောင်းသည်။ မနှင်းရီနှင့် ရွာဆွေရွာမျိုးဖြစ်သည်။ မနှင်းရီက မန္တလေးဇာတိမဟုတ်။ အထက် ကသာဖက်မှဖြစ်သည်။ ဈေးရောင်းရင်း သူ့ဦးလေးနှင့် ညားကြခြင်းဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် လူကြီးခြင်း ခင်မင်ရင်းနှီးကြပြီးဖြစ်၏။
သို့သော် ရပ်ကွက်ခြင်းခြား၏။ တစ်ပြကျော်ကျော်ခန့်ဝေးသည်။ ကေသွယ်မိုးနှင့် ကိုကိုမောင်တို့မှာ တစ်နှစ်ထက် တစ်နှစ် ရင်းနှီးလာကြသည်။ တစ်ဦးကို တစ်ဦး သံယောဇဉ်လေးတွေ နှောင်ဖွဲ့လာကြသည်။
ဤသို့ဖြင့် (၁၀)တန်းအောင်ပြီး တက္ကသိုလ် ဒုတိယနှစ်တွင် မနှင်းရီ တစ်ယောက် သားအိမ်ကင်ဆာနှင့် ကွယ်လွန်သွားသည်။ မိဘသဖွယ် သံယော ဇဉ်တွယ်ခဲ့ရသူ ကိုကိုမောင် တစ်ယောက် အတော်လေး နှမြောတသ ဝမ်းနည်းပူဆွေးခဲ့ရသည်။ ဦးလေးဖြစ်သူမှာလည်း သောက ပရိဒေဝ စိတ်ဖြင့် အရက်တွေ ဖိသောက်လာသည်။
လုပ်ငန်းကလည်း အတော်လေး ဖြစ်ထွန်းသည်။ သည်ကြားထဲ ချဲက တစ်သောင်းဖိုး ပေါက်လိုက်သေး၏။ ချဲ တစ်သောင်းဖိုး ပေါက်ပုံ က ဂမ္ဘီရဆန်၏။ မနှင်းရီ ကွယ်လွန်ပြီး (၄၅) ရက် အရောက်တွင် ကိုကိုမောင် အိပ်မက် မက်၏။ အဒေါ်ဖြစ်သူ မနှင်းရီက အိပ်မက်ထဲတွင် သူ့အမေအရင်းဖြစ်နေ၏။
အခုလို မထင်မှတ်ဘဲ သားနှင့်ခွဲရတာကို ရင်နာလို့မဆုံးဖြစ်ရကြောင်း။ သို့သော် အမေက အမြဲစောင့်ရှောက် သွားမှာဖြစ်ကြောင်း။ မီးဖိုခန်း ကြောင်အိမ်အောက်ဆုံးထပ်ရှိ အံဝှက်ထဲတွင် ငွေသုံးသောင်းရှိကြောင်း။ (၂)သောင်းကို သံဃဒါနဆွမ်း လောင်း၍ ကျန်တစ်သောင်းကို အမေပေးတဲ့ ဂဏန်းကို ထိုးဖြစ်အောင် ထိုးစေချင်ကြောင်း အတန်တန်မှာပြီး ပျောက်ကွယ်သွားသည်။
သူ ပေးတဲ့ ဂဏန်းက (၃၄၃) (၁၆-၇-၂၀၀၆) ဖြစ်သည်။ မနှင်းရီ ပျောက်ကွယ်သွားသောအခါ ကိုကိုမောင်က အော်ဟစ်ငိုယိုပြီး နောက်က ပြေးလိုက်သည်။
အခန်းထဲက အော်သံကြား၍ ကိုမြင့်ဟန် လန့်နိုးကာ ကိုကိုမောင့် အခန်းထဲရောက်လာသည်။ မျက်ရည်တွေက စီးကျနေပြီး အိပ်မက် ထဲ ယောင်အော်နေမှန်းသိသွား၍
ကိုကိုမောင် ဝုန်းကနဲထထိုင်သည်။ မျက်လုံးကို ပွတ်သပ်ကြည့်တော့ ဦးလေးဖြစ်သူက ခုတင်ပေါ် သူ့ဘေးတွင်ရောက်နေသည်။
“ ဟာ…ဦးလေး…အိပ်မက် မက်နေတာဗျ…”
ကိုကိုမောင်က သူမြင်သမျှကို အပြည့်အစုံပြောပြလိုက်သည်။ နာရီကြည့်လိုက်တော့ နံနက် (၃)နာရီခွဲရှိနေပြီ။
ကိုကိုမောင့် အိပ်မက် ကြောင့် ကိုမြင့်ဟန်မှာ သူ့မိန်းမကို ပိုပြီးသတိရမိသည်။ ကိုကိုမောင်ကို ပြန်အိပ်ခိုင်းပြီး ညကလက်ကျန်အရက်ကို သောက်ရင်း သူ့မိန်းမ အကြောင်းတွေထိုင်တွေးရင်း မိုးလင်းခဲ့သည်။ အိပ်မက်အတိုင်း ကြောင်အိမ်ထဲ ရှာကြည့်ရာ ငွေသုံးသောင်း တကယ်တွေ့ရ၏။
မနှင်းရီ မှာသည့်အတိုင်း ဆွမ်းလောင်းသည်။ ချဲထိုးသည်။ အမှန်တကယ်လည်း ပေါက်ခဲ့သည်။ နောက်တစ်ရက်တွင် ကိုမြင့်ဟန်က ကိုကိုမောင့် အမေကို လှမ်းမှာသည်။ သက်ဆိုင်ရာ ရပ်ကွက်လူကြီးများရှေ့မှောက်တွင် စာချုပ်စာတမ်းနှင့်တကွ ကိုကိုမောင်ကို တရားဝင် မွေးစား လိုက်တော့သည်။
(၁၅)ရက်ခန့်နေပြီး မပြန်ခင် တစ်ရက်အလို ညတွင်
“ ငါ့မောင်…မင်းလည်း အရက်တွေ သိပ်မသောက်ပါနဲ့ကွယ်…ကျန်းမာရေးလည်း ဂရုစိုက်ပါဦး… အစ်မ ရောက်ကတည်းက မင်းကို အကဲ ခတ်နေတာ မင်းသောက်ပုံက သိပ်လွန်လွန်းနေတယ်… အစ်မကတော့ အိမ်ထောင်ပြုစေချင်တယ်… အခုမှ (၃၉)နှစ်ရှိသေးတာပဲ…စီးပွားရေး ကလည်း ပြည့်စုံနေတဲ့ဥစ္စာ… အထိန်းအကွပ်မရှိရင် ဒီထက်ပိုဆိုးသွားမယ်…”
ကိုမြင့်ဟန် တစ်ယောက် သူ့အစ်မ ပြောတာကို နားထောင်နေ၏။ ဘာမှတော့ ပြန်မပြော။ သို့သော် သူ့မျက်နှာတွင် ပြုံးယောင်သမ်းနေ ၏။ ကိုကိုမောင့် အမေပြန်သွား၍ (၃)လမြောက် အရောက်တွင် ကိုမြင့်ဟန် တစ်ယောက် မုံရွာဘက် ခရီးထွက်ရာမှ အပြန် မိန်းမတစ် ယောက်ပါလာသည်။
နာမည်က မဝေဝေခိုင် ဟုခေါ်သည်။ အသက်က (၂၉) (၃၀) ဝန်းကျင်သာ ရှိသေး၏။ ချောချော တောင့်တောင့် လုံးကြီးပေါက်လှ။ ဦးလေးက မဝေဝေခိုင်နှင့် မိတ်ဆက်ပေးသည်။ တခြား ဘာမှအထွေအထူးမပြော။ ထိုနေ့မှစ၍ မဝေဝေခိုင်သည် ဦးလေး၏ ဇနီးမယားအဖြစ် ရောက်ရှိသွားပါတော့သည်။
ကိုကိုမောင်နှင့် ကေသွယ်မိုးတို့မှာ နှုတ်ကဖွင့်မပြောကြသည့်တိုင် အတွင်းစိတ်က တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် ချစ်ကြိုက်နေကြ သည်။ (၈)တန်းမှစ၍ ယခု တက္ကသိုလ် နောက်ဆုံးနှစ်အထိ အတူသွား အတူစား အတူလာမို့ သူငယ်ချင်းတွေရော နှစ်ဖက်မိဘများကပါ သဘောတူထားပြီးဖြစ်သည်။
ယနေ့ ကျူရှင်စာတွေ အပြန်အလှန်ကူးကြရန် ကေသွယ်မိုး တစ်ယောက် ကိုကိုမောင့်ထံ သွားဖို့ ဖီးလိမ်းပြင် ဆင်နေ၏။ စိတ်ကူးလေးယဉ် သီချင်းလေးတအေးအေးနှင့် ဖြစ်သည်။ သူ့အမေနှင့် အဖေတို့ကလည်း ကျောက်ဆည်ဖက် ဘုရားဖူးသွား ကြသဖြင့် အိမ်မှာ သူတစ်ယောက်ထဲရှိသည်။ (၁၀)နာရီအရောက်လာခဲ့မည်ဟု ကိုကိုမောင်ကို မှာလိုက်ပြီးဖြစ်သည်။
အခု (၉)နာရီ (၁၅) မိနစ်ခန့်ရှိနေပြီ။ တရားဝင် ရည်းစားမဖြစ်သေးသည့်တိုင် ချစ်သူအဖြစ် သတ်မှတ်ထားသူမို့ ရင်တွေခုန်မိ၏။ အခုနောက်ပိုင်း ကိုကိုမောင့် အကြည့်တွေက နှလုံးတုန် ရင်ခုန်သည်းထိတ်စရာတွေဖြစ်သည်။ ကေသွယ်မိုးကလည်း အပျိုကြီးဖားဖားဖြစ်ကာ အဖုအထစ်အရှိုက်အဝိုက် ကောက်ကြောင်းတွေက ပီပြင်ဖွံ့ဖြိုး အလှတွေတိုးလျှက်ရှိ သလို ကိုကိုမောင်ကလည်း ရင်အုပ်ကားကားနှင့် မိန်းမသားတွေ စွဲမက်စေသော ယောကျ်ားပီသသော ရုပ်လက္ခဏာတွေ ထင်ရှားပေါ် လွင်လာ၏။
ကေသွယ်မိုး တစ်ယောက် ကျူရှင်စာအုပ်တွေ လွယ်အိတ်ထဲထည့်နေစဉ် စစ်ကိုင်းတွင်နေသော သူ့အစ်မ ယောက်ျား ထွန်းထွန်း ရောက်လာ၏။ ထွန်းထွန်းက အသက်(၃၀)ခန့်ရှိပြီ။ သူ့အမထက် (၅)နှစ်ခန့်ကြီးပြီး ကေသွယ်မိုးထက် (၁၀)နှစ်ခန့်ကြီးသည်။ ထမင်းစားချိန်မို့ ထမင်းပြင်ပေးရသည်။ သူ့ယောက္ခမတွေ မရှိမှန်းသိ၍ ထွန်းထွန်း တစ်ယောက် ခယ်မဖြစ်သူ ကေသွယ်မိုးကို ခပ်ရဲရဲပင် ကြည့်သည်။ မတွေ့ရတာကြာပြီမို့ ခယ်မဖြစ်သူ တစ်တစ်ရစ်ရစ် စွင့်စွင့်ကားကား အပျိုကြီးဖားဖားဖြစ်လို့နေသည်။
သေးသွယ်သော ခါးအောက်ပိုင်းရှိ အိုးကြီးနှစ်မွှာမှာ ဝိုင်းစက်ကားထွက်နေပြီး နောက်ဖက်သို့ မို့မောက်လျှက်အိစက်လုံးတစ်နေ၏။ ဖြောင့်စင်းဖြိုးတုတ်သော ပေါင်တံကြီးတွေက ထွန်းထွန်း ရင်ကို လှုပ်ခတ်စေသည်။ ကေသွယ်မိုး ဟင်းပန်းကန်နှင့် ပြန်ရောက်လာ၏။ ဟင်းပန်းကန်ကို စားပွဲပေါ် ငုံ့ချပေး၏။
လည်ဟိုက်အင်္ကျီအတွင်းမှ ပြည့်လျှံထွက်နေသော နို့အုံသားတွေက ဖြူဖွေးအိထွေးနေ၏။ လှုပ်ရှား မှုနှင့်အတူ နို့ကြီးနှစ်လုံးမှာ တသိမ့်သိမ့်နှင့် လှုပ်ခါနေသည်။ ရမ္မက်ကြွစရာ မြင်ကွင်းကို အနီးကပ်မြင်နေရသော ထွန်းထွန်း တစ်ယောက် ရာဂသွေးတွေ ပူနွေးလာ၏။ အပြင်သွားဖို့ ပြင်ထား ပြီဖြစ်၍ ကေသွယ်မိုးကိုယ်မှ မွှေးရနံ့တွေ သင်းပျံ့လျှက်ရှိသည်။
ကေသွယ်မိုး တစ်ယောက် သူ့ကို မရိုးမသားကြည့်နေသော ခဲအို၏ ရမ္မက်မျက်လုံးများကို မမြင်တွေ့ရသေး။ ကိုကိုမောင်နှင့် တွေ့ရ မည့် အရေးကိုသာ တွေးလျှက် စိတ်ကူးယဉ်ကြည်နူးလျှက်ရှိသည်။ လည်ဟိုက်အင်္ကျီကိုလည်း တမင်သက်သက်ရွေးဝတ်ခဲ့၏။ သူတို့နှစ် ယောက် စာကျက် စာကူးလျှင် အိမ်နောက်ဖေးရှိ ပန်းစက္ကူပင်ကြီးအောက်တွင် ပြုလုပ်ကြမြဲဖြစ်သည်။
ထိုပန်းစက္ကူပင်ကြီးအောက်တွင် ဆက်တီခုံများရှိ၏။ စားပွဲဟိုဖက်ထိပ် ဒီဖက်ထိပ်မှထိုင်၍ စာကူးကြ၏။ စာငုံ့ကူးလျှင် တင်းရင်းမို့မောက်နေသော သူ့နို့အုံဖွေးဖွေးနုနုကြီးကို ကိုကိုမောင် မြင်တွေ့စေရန် လည်ဟိုက်အင်္ကျီကို တမင်ရွေးဝတ်ခြင်းဖြစ်သည်။
“ ရော့…ထမင်းအုံးလေ ကိုထွန်း…”
ကုန်လုလုဖြစ်သော ထမင်းပန်းကန်ထဲသို့ ထမင်းငုံ့ထည့်ပေးလိုက်စဉ် ဝင်းမွတ်နုထွတ်သော နို့ကြီးနှစ်မွှာကို တဝင်းဝင်း တလက်လက် တောက်ပနေသော ရမ္မက်မျက်လုံးတို့ဖြင့် စူးစူးဝါးဝါးကြီးကြည့်နေသော ခဲအိုဖြစ်သူ ထွန်းထွန်းကို ဖျပ်ကနဲမြင်လိုက်၏။
ကေသွယ်မိုး မသိ ချင်ယောင်ဆောင်နေလိုက်သည်။ သေချာသည်ထက် သေချာအောင် စမ်းသပ်လို၍ ကေသွယ်မိုး တစ်ယောက် ရေအိုးစင်ရှိရာသို့ ရေသွား ခပ်သည်။ သူမ၏ ထွားကားဝိုင်းစက်သော ဖင်ဆုံကြီးကို တမင်လှုပ်ခါအောင် လုပ်ပြသည်။ ထွန်းထွန်း တစ်ယောက် ကာမရာဂတွေ တဝင်းဝင်းတောက်နေသော မျက်လုံးတို့ဖြင့် ကြည့်နေမည်ကို စိတ်က အလိုလိုသိနေ၏။
ထွန်းထွန်း တစ်ယောက် အငိုက်မိသွား၍ ရုတ်တရက် စကားမပြောနိုင်ဘဲ ဖြစ်သွားသည်။ ပြီးတော့မှ
ထမင်းနင်သံကြီးဖြင့် အထစ်ထစ် အငေါ့ငေါ့ပြောလိုက်မိသည်။
“ ဦးလေးတို့က ဘယ်အချိန်ပြန်လာမှာလဲ”
“ ဟင့်အင်း…ဒီနေ့ ပြန်မလာဘူး…ညအိပ်မှာ”
ထွန်းထွန်း ရင်ထဲ ဘုရားပွဲလှည့်သွား၏။ အသေအချာကြည့်လေ စွဲမက်စရာကောင်းလေဖြစ်နေသည့် ခယ်မကို ထွန်းထွန်း တဝကြီး ကြည့်လိုက်၏။ သူ့မိန်းမအပျိုတုန်းကထက် သာလွန်သောအလှပစ္စည်းတွေ တစုတဝေးကြီးရှိနေကြောင်း အကဲခတ်မိ၏။
ထိုစဉ် ကေသွယ် မိုးမှာ ချာတိတ်ရှိသေးသည်။
“ ကဲ… ကိုထွန်း ထမင်းစားပြီးရင် အေးအေးဆေးဆေး နားအုံးကျနော် သူငယ်ချင်းအိမ် စာသွားကူးအုံးမယ်…”
ကေသွယ်မိုး တစ်ယောက် လွယ်အိတ်လွယ်၍ ကိုကိုမောင့်ထံ ထွက်လာခဲ့သည်။
သူ့ကိုယ်ပေါ်တွင် ကပ်ပါလျှက်ရှိသော အဖုအထစ် အမို့အမောက် အစွင့်အကား အသားအုံအသားဆိုင်တို့၏ တန်ဖိုးကြီးမားလှပုံကို လက်တွေ့သိလိုက်၍ အလှမာန်ဝင့်ကာ ကျော့ကျော့မော့ မော့နှင့် ဘဝင်မြင့်လျှက်ရှိပါတော့သည်။ နာရီကြည့်လိုက်တော့ (၁၁)နာရီခွဲပြီ။
“ ဟောတော့…(၁၀)နာရီ ချိန်းထားတာ ဒုက္ခပါဘဲ”
ကေသွယ်မိုး တစ်ယောက် ခပ်သွက်သွက်သုတ်ခြေတင်လိုက်ပါတော့သည်။
ကိုကိုမောင် ကျူရှင်က ပြန်လာတော့ (၉)နာရီ (၄၅)မိနစ် ရှိပြီ။ ဖြစ်နိုင်လျှင် ကေသွယ်မိုးကို ရည်းစားစကားပြောမည်။ အခွင့်သာလျှင် ဖြုတ်မည်။ ကေသွယ်မိုး၏ အပြောအဆို အကြည့်အရှုအမူအယာတွေက သူဘာလုပ်လုပ် သဘောတူကြည်ဖြူမည့် လက္ခဏာတွေ ပြသ လျှက်ရှိ၏။
လက်နှေးလို့မဖြစ်။ အိမ်ရှေ့ရောက်တော့ ဝင်းတံခါးမှာ သော့ခတ်ထားသည်။ သူ့မိထွေးဝမ်းကွဲ မရှိကြောင်း သေချာ၏။ ဦးလေး ဖြစ်သူက အလုပ်ရုံမှာသာနေသည်မို့ ဒီအချိန်အိမ်မှာနေလေ့မရှိ။ ကိုကိုမောင် တစ်ယောက် သူ့စိတ်ကူး အကောင်အထည် ဖော်နိုင်တော့ မည်မို့ အူမြူးနေသည်။
ကေသွယ်မိုး၏ တင်းတင်းမို့မို့ နို့အုံနှစ်မွှာနှင့် ပြည့်တင်းစွင့်ကားသော တင်ဆုံထွားထွားတစ်တစ်ကြီးကို မြင်ယောင် မိကာ သူ့ပေါင်ကြားက ဒုတ်တန်ကြီးမှာ မတ်ကနဲ တောင်ထလာသည်။ ဘဝပေးကုသိုလ်အရ ယောကျ်ားပီသစွာ ချောမောရုံမျှမက စံချိန်မှီ သော ဒုတ်ကြီးကိုပါ ပိုင်ဆိုင်ထားသည်။
သူ့ ဒုတ်တန်ကြီးမှာ အရှည် (၇)လက်မခွဲ လုံးပတ် (၄)လက်မခွဲမို့ အားရကျေနပ်စရာကောင်းလှသည်။ ကေသွယ်မိုး ခံနိုင်လိမ့်မည် မဟုတ်။ သို့သော် ရှာဖွေမှတ်သားထားသော ကာမဗဟုသုတတို့ဖြင့် ချော့မော့နှူးနှပ်၍ ဖြုတ်ရမည်သာ။ တွေးရင်း တွေးရင်း လီးကြီးက ကြွ သထက်ကြွ မတ်သထက်မတ်တောင်လာ၏။ ကိုကိုမောင် သူကိုင်သော သော့ဖြင့် တံခါးဖွင့်ဝင်လိုက်သည်။
ပြီးတော့ ပြန်ပိတ်၏။ ကေသွယ်မိုး လာလျှင် ဘဲလ်တီးနေကျဖြစ်သည်။ အပေါ်ထပ်တက်၍ ကြာကြာလိုးနိုင်အောင် ညဈေးက အသင့်ဝယ်ထားသော လီးကြီး ဆေးကို လိမ်းလိုက်သည်။ သောက်ဆေး ကိုတော့ ကေသွယ်မိုးလာမှ သောက်မည်။ ပထမဆုံး စတင်ဖိုက်ရမည့်ပွဲမို့ ယောကျ်ားအစွမ်း သတ္တိပြနိုင်မှဖြစ်မည်။
ကြာကြာစိမ်လိုးနိုင်လေ မိန်းမစွဲလေဟူသော စကားကို ကိုကိုမောင် သိထား၏။ နဂိုကပင် တောင်မတ်နေပြီဖြစ်သော လီးတန်ကြီးမှာ ဆေးလိမ်းလိုက်သောအခါ သံမဏိချောင်းကြီးကဲ့သို့ မာကျောလာသည်။ ဒစ်ဆံ ပြဲကြီးကလည်း ဝင်းပြောင်တင်းကားနေ၏။
“ ကလင် ကလင် ကလင်”
ကိုကိုမောင် ပုဆိုးကို ကပျာကယာဝတ်၍ အပေါ်ထပ်မှ ဆင်းလာ၏။ တံခါးဝသို့ရောက်သောအခါ ကေသွယ်မိုး မဟုတ်ဘဲ မိထွေးဝမ်းကွဲ မဝေဝေခိုင် ဖြစ်နေ၏။ တံခါးဖွင့်၍ သော့ဖြုတ်ရုံမျှသာရှိသေး မဝေဝေခိုင်က တံခါးကိုဆွဲဟကာ အလောတကော ဝင်လိုက်သည်။
သည်တော့ ရပ်လျှက်ရှိသော ကိုကိုမောင့် ကိုယ်လုံးနှင့် မဝေဝေခိုင် ကိုယ်လုံးမှာ ထိထိမိမိကြီး ပွတ်တိုက်သွား၏။ မဝေဝေခိုင်၏ ကြီးမား စွင့်ကားသော ဖင်ဆုံသားကြီးက ကိုကိုမောင်၏ ပေါင်ရင်းကို အိကနဲ ဖိမိသွား၏။ ထို့အတူ ဆူဖြိုးတင်းအိသော နို့ကြီးနှစ်မွှာကလည်း ကိုကို မောင်၏ နံစောင်းကို နွေးထွေးအိစက်စွာ ဖိကပ်သွားသည်။
မဝေဝေခိုင် အတော်ကြာသည်အထိ ဖိကပ်ထား၏။ ပြီးမှ အိမ်ထဲသို့ ခပ်သွက် သွက် ဝင်သွားသည်။ စောစောကပင် ကိုယ့်အတွေးနှင့်ကိုယ် စိတ်တွေထနေသဖြင့် ကိုကိုမောင် တကိုယ်လုံး ရှိန်းဖိန်းတုန်လှုပ်သွား၏။ လိမ်းဆေးကလည်း တရိပ်ရိပ်သတ္တိပြလျှက်ရှိ၏။
ကိုကိုမောင် တစ်ယောက် ကေသွယ်မိုးကို မေ့သွား၏။ ထို့ကြောင့် ဘာကိုမှသတိမရတော့ဘဲ မဝေဝေခိုင် နောက်သို့လိုက်ခဲ့သည်။ တံခါးကိုလည်း သည်အတိုင်း ဖွင့်ထားခဲ့မိသည်။ ခြံဝင်းနှင့် အိမ်မကြီးက ပေ (၄၀)လောက် ကွာသည်။ ကိုကိုမောင် အိမ်တွင်းရောက်သွား တော့ မဝေဝေခိုင်က ဖိနပ်ကိုကုန်းကောက်ရင်း အခန်းထဲဝင်သွားသည်။
ကုန်းလိုက်သည့်အခိုက်တွင် ဖင်ဆုံထွားထွားကြီးက အစွမ်းကုန် စွင့်ကားသွားသည်။ ထိုမြင်ကွင်းကြောင့် ကိုကိုမောင့် ပေါင်ကြားက လီးတန်ကြီးမှာ တင်းကနဲ တင်းကနဲဖြစ်သွားသည်။ နိမ့်ချီ မြင့်ချီဖြင့် စည်းချက်ကျကျ လှုပ်ခါသွားသော ဖင်ဆုံကြီးက ကိုကိုမောင့် မျက်စိထဲ စွဲသွားသည်။
ကိုကိုမောင် တစ်ယောက် သူ့ဦးလေးနှင့် မဝေဝေခိုင် တို့ လိုးကြတာကို ချောင်းချောင်းကြည့်ဖူး၏။ မဝေဝေခိုင်က အပေးကောင်းသည်။ ရခါစကတော့ ဦးလေးကလည်း အတော်လိုးနိုင်သည်။ မဝေဝေခိုင်၏ အပေးကောင်းခြင်း၊ အပြုစုကောင်းခြင်းတို့ကြောင့် ဦးလေးဖြစ်သူ သောကမှာ ပါးလျှစပြုလာသည်။ အရက်ကိုလည်း အတိုင်းအဆနှင့်သောက်တော့၏။ မနှင်းရီလောက် မချစ်သည့်တိုင် သူ့အတိုင်းအတာနှင့်သူ မဝေဝေခိုင်အပေါ်မှာ သာယာတပ်မက်လာသည်။
တစ်နေ့ ဦးလေးအစောကြီး အိမ်ပြန်လာသည်။ ခါတိုင်း သည်အချိန် ပြန်လာလေ့မရှိ။ မျက်နှာကြောလည်း တင်းနေသည်။ အပေါ် ထပ် အခန်းထဲစာကျက်နေသော ကိုကိုမောင့်ထံ ရောက်လာသည်။
“ ကိုကိုမောင်…မဝေ မရောက်သေးဘူးလား”
“ ဟုတ်ကဲ့ ဦးလေး”
“တောက်… ဒီဖာသယ်မတော့… သိကြသေးတာပေါ့ကွာ…”
ည (၉)နာရီထိုးတော့ မဝေဝေခိုင် ပြန်ရောက်လာသည်။ ဦးလေးက အခန်းထဲကစောင့်ရင်း အရက်သောက်နေသည်။ အခြေအနေ ထူးခြားတော့မည်ကိုသိ၍ ကိုကိုမောင်ကလည်း အပေါ်ထပ်မှ ချောင်းကြည့်နေသည်။
ဦးလေးကိုတွေ့တော့ မဝေဝေခိုင် အံ့သြသွား၏။ သို့ သော် ဟန်လုပ်၍
“ ဟင်…အစ်ကိုကြီးက အစောကြီးရောက်နေတယ်…”
ဦးလေးက ဘာစကားမှမပြောဘဲ အရက်သောက်ရင်း ခပ်တည်တည်ကြည့်နေသည်။ မဝေဝေခိုင်က ဦးလေးရှေ့မှာပင် အဝတ်အစား လဲသည်။ အတွင်းခံ ဘောင်းဘီနှင့် ဘရာစီယာသာ ကျန်ရှိနေစဉ် ဦးလေးထံသို့လာပြီး ဘေးကပူးကပ်ထိုင်လိုက်သည်။
ပြောပြောဆိုဆို ပုဆိုးကိုလှန်၍ ဦးလေး လီးတန်ကြီးကို ပွတ်သပ်ဆုတ်ဆွပေးသည်။ ဦးလေးက မလှုပ်။ အရက်ကိုသာ ဆက်သောက် နေ၏။ ဦးလေး၏ မတုန်မလှုပ် အမူအယာကြောင့်
“ ဘယ်လိုဖြစ်နေတာလဲကွာ… ခပ်တည်တည်ကြီး… ကြည့်ပါလား ငေါင်တောင်တောင်နဲ့ လှုပ်လည်း မလှုပ်ဘူး…”
မဝေဝေခိုင်က ငေါင်စင်းစင်း ဖြစ်နေသော လီးတန်ကြီးကို လက်ဖဝါးပေါ်တင်၍ (၂)ချက် (၃)ချက် ဆုတ်ရင်းပြောသည်။
“ မင်း…နေ့လည်က ဘယ်သွားသေးလဲ…”
“ မြို့သစ်က ညီမဆီပါ…”
“ တစ်ယောက်ထဲပေါ့ အစ်ကိုကြီးကလဲ”
“မင်း သွားတဲ့အိမ်နဲ့ မျက်နှာချင်းဆိုင်အိမ်မှာ နေ့လည်က ငါ ပစ္စည်းသွားပို့တယ်… မင်းကို ကောင်တစ်ကောင်ရဲ့ ဆိုင်ကယ်နောက်မှာ တွေ့လိုက်တယ် အဲဒါ အစ်ကိုပါလို့တော့ မပြောနဲ့… ခါးဖက်ပြီး လိုက်သွားတာ အသေအချာမြင်လိုက်တယ် မင်း… ငါနဲ့ မပေါင်းချင်ရင် အခု ဆင်းသွားလို့ရတယ်နော်”
“ အဟင်း…ဟင်း အစ်ကိုပါလို့ မပြောနဲ့ဆိုပေမယ့် ပြောရမှာပဲ အစ်ကိုကြီးရေအဲဒါ အစ်ကိုဝမ်းကွဲ အစစ်ပါ”
မဝေဝေခိုင်က ဆက်တီခုံပေါ်က ဆင်းလိုက်ပြီး ဒူးတုတ်ထိုင်လျှက် ဦးလေးလီးကြီးကို ပါးစပ်ဖြင့် မှုတ်ပေးနေသည်။ ဦးလေးကမူ ဘာမှ မပြောတော့ဘဲ သူလုပ်သမျှ အသာငြိမ်ခံနေသည်။ အတော်ကြာတော့ လီးကြီးက မတောင်ချင့် တောင်ချင် တောင်လာသည်။ မဝေဝေခိုင် ဘောင်းဘီနှင့် ဘရာစီယာကို ချွတ်ပစ်လိုက်ပြီး ဦးလေးလက်ကို သူ့နို့အုံကြီးပေါ်တင်ပေးလိုက်သည်။ ဦးလေးက နို့ကြီးနှစ်လုံးကို တလှည့်စီ ဆုတ်ချေပေးနေ၏။ မဝေဝေခိုင်က ဒစ်ကြီးကို ပြဲသထက်ပြဲအောင်ဖြဲပြီး ပါးစပ်ဖြင့် တေ့စုပ်ပေးသည်။
ဦးလေး ပုံစံကြည့်ရသည်မှာ သိထားသလောက် မပြောတော့ဘဲ အချောင်ရသော မိန်းမတစ်ယောက်ကို အချောင်လုပ်ရသလိုမျိုး ပေါ် လွင်နေသည်။ ကိုကိုမောင် တစ်ယောက် ဦးလေးနှင့် နေရာချင်းလဲလိုက်ချင်သည်။ ကြည့်ရင်း ကြည့်ရင်း မနေနိုင်တော့၍ ဂွင်းတိုက်လိုက်၏။
လရေတွေက ဗျင်းကနဲ ပန်းထွက်ကုန်သည်။ နှစ်နှစ်ကာကာ မချစ်သည့်တိုင် သွေးသားဆန္ဒအရ ထကြွလာပုံရ၏။ မဝေဝေခိုင်ကို ခုတင်ပေါ် ကန့်လန့်ဖြတ် ပက်လက်အိပ်ခိုင်းပြီး ပေါင်နှစ်ချောင်းကို ပင့်ထောင်ဖြဲကားပြီး မတ်တပ်ရပ်၍ ဆောင့်ပါတော့သည်။ (၃)မိနစ် လောက်အရောက်တွင် ပြီးသွားပုံရ၏။ ဦးလေး သူ့လီးတန်ကြီးကို ဆွဲချွတ်လိုက်သည်။ စောက်ဖုတ်ထဲက ထွက်လာသည်နှင့် လီးတန်ကြီး က ပျော့ခွေငိုက်ဆင်းနေတော့၏။
အရက်တစ်ခွက်သောက်ပြီး ခုတင်ပေါ်တက်အိပ်တော့သည်။ မကြာခင် ဦးလေး အိပ်ပျော်သွားတော့၏။ သည်တော့မှ စောစောက ဆက်တီခုံပေါ်ပြန်ထိုင်ပြီး သူ့နို့ကြီးနှစ်လုံးကို သူ့ဖာသာ ဆုတ်ချေနေ၏။ (၁၅)မိနစ်လောက်ကြာသောအခါ ခုတင်ခြေရင်းရှိ ဘီရိုဆီသို့သွား ပြီး ဘီရိုအောက်လက်နှိုက်သည်။ လက်ထဲတွင် အဝတ်နှင့် ပတ်ထားသော ပစ္စည်းတစ်ခု ပါလာသည်။
ခုံပေါ်ပြန်ထိုင်ပြီး အဝတ်ကိုဖြေလိုက် သည်။ ရာဘာလီးတုကြီးဖြစ်နေ၏။ ကိုကိုမောင် အံ့သြသွားသည်။ မဝေဝေခိုင်က ပေါင်နှစ်ချောင်းကိုဖြဲကာ လီးတုကြီးကို သူ့စောက်ဖုတ် ထဲ ထိုးသွင်းလိုက်ပြီး အချက်ပေါင်းများစွာ အသွင်းအထုတ်ပြုလုပ်ပါတော့သည်။ (၂၅) မိနစ်ခန့် အရောက်တွင် ခြေထောက်နှစ်ချောင်း ဆန့်တန်းလျှက် တဆတ်ဆတ်တုန်လှုပ်ကာ ငြိမ်သက်သွားတော့သည်။
ထိုနေ့ကပင် ကိုကိုမောင့် စိတ်ထဲ မဝေဝေခိုင်ကို လိုးခွင့်ရှိကြောင်း လိုးလို့ရကြောင်း သဘောပေါက်သွားခဲ့၏။ သို့သော် ကေသွယ်မိုး မျက်နှာကို မြင်ယောင်မိ၍ မလိုးဖြစ်ခဲ့ပါ။ သူ ကေသွယ်မိုးကို တကယ် ချစ်သည်။ နှစ်နှစ်ကာကာချစ်ပါသည်။ ယနေ့…. ငဲ့ကွက်မှုတံတိုင်းကြီး ပြိုကျသွားခဲ့ပြီ။
ဒီကိစ္စ ဖြစ်တော့မည်ဆိုတာ ကိုကိုမောင် ရိပ်မိခဲ့သည်။ သူ့ရဲ့ ကြီးမားစွင့်ကားလှတဲ့ ဖင်ဆုံသားအိအိကြီးဖြင့် သူ့ပေါင်ကို တမင်ဖိပွတ် သွားသည်။ ပြီးတော့ ဆူဖြိုးတင်းအိလှသော နို့ကြီးနှစ်လုံးကလည်း သူ့နံစောင်းကို ပွတ်တိုက်သွားသည်။ စောစောကပင် ကေသွယ်မိုးကို အပြတ်လိုးရန် လီးကြီးဆေးတွေလိမ်းထားပြီး ကြာကြာလိုးနိုင်သည့် ဆေးကိုပါ သောက်ထားသည်။
သန်းခေါင်ထက် ညဉ့်မနက်တော့ပါ။ ဤမျှအထာတွေ ပြနေပါလျက်နဲ့မှ ကိုကိုမောင် ငြိမ်သက်နေလျှင် ယောက်ျားမဟုတ်တော့ဘဲ နွားသတ္တဝါ ဖြစ်ရပေတော့မည်။ ကဲ သေဖို့ သာပြင်ပေတော့ မဝေဝေခိုင်ရေ။ စိတ်ထဲကကြိမ်းဝါးလျှက် မဝေဝေခိုင် အခန်းထဲ စွတ်ဝင်လိုက်သည်။
မဝေဝေခိုင်က ကိုယ်ပေါ်က အဝတ် အစားတွေကို တစ်ခုမကျန်ချွတ်ပြီး အဝတ်အစားလဲရန် ပြင်ဆင်နေသည်။ အခန်းထဲစွတ်ဝင်လာသော ကိုကိုမောင့်ကို မြင်တော့ ထမီတစ်ထည်ကို ကပျာကယာစွတ်ပြီး ခြုံထားလိုက်၏။ ကိုကိုမောင်က အခန်းတံခါးကို ဂျက်ထိုးပိတ်လိုက်သည်။ မဝေဝေခိုင်က သူလုပ်သမျှကို ဘာစကားမှမပြောဘဲ ကျေနပ်သောအကြည့်နှင့် ကြည့်နေသည်။
မဝေဝေခိုင် ကြည့်နေခိုက်မှာပင် ပုဆိုးနှင့် အင်္ကျီကို ချွတ်ပြီး ကုလားထိုင်ပေါ် ပစ်တင်လိုက်သည်။ ရင်အုပ်သားတွေက ယောကျ်ားပီသစွာ ဖုထစ်နေပြီး ကျစ်လစ်သန်စွမ်းသော ကိုယ်လုံးက မဝေဝေခိုင်ကို ဖမ်းစားထားသည်။ ထို့ထက် သည်းထိတ်ရင်ဖိုစရာ မြင်ကွင်းက ကိုကို မောင့် ပေါင်ကြားရှိ တဆတ်ဆတ် တောင်မတ်နေသော လီးတန် တုတ်တုတ်ကြီးပင် ဖြစ်သည်။
လီးတန်ကြီး ပတ်ပတ်လည်တွင် သွေးကြော ကြီးတွေက အပြိုင်းပြိုင်းထကာ ဖုဖေါင်းနေသည်။ မဝေဝေခိုင် တဏှာရာဂအားကြီးကြောင်း ကိုကိုမောင် သိထားပြီးဖြစ်သည်။ ဦးလေးနှင့် လိုးတာ အားမရတိုင်း လီးတုနှင့် စခန်းသွားရတာကိုလည်း သိပြီးဖြစ်သည်။
သံမဏိချောင်းကြီးကဲ့သို့ မာကျောသန်စွမ်းလှသော လီးတန်တုတ်တုတ်ကြီးကို တပ်မက်စွာကြည့်နေသော မဝေဝေခိုင်၏ ကာမရာဂ စိတ်များ တစတစပြင်းထန်လာသည်။ စောက်ဖုတ်ကြီးက တဖြည်းဖြည်း တင်းမာဖေါင်းကားလာသည်။ စောက်ခေါင်းဝ တလျှောက်မှာ လည်း တရွရွနှင့်ဖြစ်လာသည်။
သူမရင်ထဲ ဖြိုးကနဲ ဖျင်းကနဲဖြစ်သွားပြီး စောက်ဖုတ်ထဲက စစ်ကနဲ ယားယားတက်လာသည်။ ကိုကိုမောင့် လီးတန်ကြီးကို အားပါးတရ ဆုပ်ကိုင်လိုက်၏။
“ ကဲ…ကြာပါတယ် မောင်လေးရယ်… မမ မနေနိုင်တော့ဘူး… မင်းလီးကြီးကို တအားခံချင်လာပြီ…လိုးပေးတော့နော်…”
မဝေဝေခိုင် တစ်ယောက် မွတ်သိပ်တောင့်တစွာ ပြောရင်း ခုတင်ဘောင်ပေါ် လက်ထောက်ကာ ဖင်ကုန်းပေးတော့သည်။
ပြူးဝင်း အက်ကားနေသော ဖင်ဆုံထွားထွားအိအိကြီးနှစ်မွှာက ကိုကိုမောင့်ကို တဒင်္ဂအသက်ရှူရပ်သွားစေသည်။ ဖင်အိုးကြီးနှစ်မွှာကြားမှ နောက် သို့ကန်ထွက်နေသော စောက်ဖုတ်နှုတ်ခမ်းသားထူထူကြီးတွေက အညိုရောင်သမ်းနေပြီး အတွင်းပိုင်းမှာမူ နီရဲနေ၏။ ကိုကိုမောင် စောက် ဖုတ်ကြီးကို လက်ဝါးနှင့် ပင့်၍သုံးလေးချက် ပွတ်ပေးလိုက်ရာ မဝေဝေခိုင်ဖင်ဆုံကြီးက အထက်သို့မြောက်တက်လာသည်။သူ့လက်ဖဝါး မှာ စောက်ရေတွေစိုရွှဲသွားသည်။
ထို့နောက် ဒစ်ပြဲကြီးကို စောက်ဖုတ်အဝသို့ တေ့ထားလိုက်ပြီး ခါးနှစ်ဖက်ကို အကျအနဆုတ်ကာ ဖိသွင်းလိုက်သည်။ ပူနွေးရှိန်းမြသော အတွေ့က တကိုယ်လုံးကို ဆိမ့်တက်သွားစေသည်။
လီးတန်ကြီးက စောက်ခေါင်းအတွင်းသို့ တထစ်ခြင်းနစ်ဝင်သွားသည်။ မဝေဝေခိုင် ဖင်အိုးကြီးနှစ်မွှာက ကြွတက် ခါရမ်းသွား၏။
အားရ ကျေနပ်သော စိတ်တွေက သူမ တကိုယ်လုံးလွှမ်းဖုံးသွားတော့သည်။ ကိုကိုမောင်က ခါးကိုမတ်မတ်ထားပြီး ပူနွေးနူးညံ့သော စောက်ဖုတ် ကြီးထဲကို လီးတန်ကြီးမြှုပ်သွင်း၍ ခေတ္တစိမ်ထားလိုက်သည်။ နူးညံ့သလောက် ညှစ်အားစုပ်အား ကောင်းလှသော စောက်ဖုတ်အတွေ့က ကိုကိုမောင့် ရာဂမီးကို အလျှံကြီးစွာ တောက်လောင်စေ၏။
တဏှာရာဂအားကြီးလှသော မဝေဝေခိုင် တစ်ယောက် သူ့စောက်ဖုတ်ကြီးထဲ သို့ တင်းတင်းကြပ်ကြပ်ကြီး နစ်ဝင်နေသော လီးအရသာကို မိန်းမူးကျေနပ်စွာ ခံစားနေစဉ် ဖင်ဆုံကြီးကို ပွတ်ပေးနေသဖြင့် အူထဲအသဲထဲ ယားယားတက်လာသည်။ ဖင်ဆုံကတဆင့် ကျောပြင်နုနုဆီသို့ ရောက်သွား၏။ ကျောပြင်မှတဆင့် အောက်သို့လျှိုဝင်ကာ နုရွတင်းအိနေ သော နို့အုံမို့မို့ကြီးကို ဆုတ်ချေပွတ်ဆွပေးသည်။
အားရကျေနပ်သည်အထိ ဆုတ်ချေပွတ်ဆွပြီးမှ အုံအရင်းကို ခပ်တင်းတင်းဆုပ်ကိုင်ပြီး ဖင်ကျောကြီးကို ရှုံ့ခွက်၍ လီးကြီးကို ပြန်နှုတ် သည်။ နို့အုံကြီးကို ခပ်ဖွဖွလေးချေပေးရင်း ခပ်ကြမ်းကြမ်းပြန်ဖိသွင်းသည်။
“အင့်… အမေ့ အား အား အီးအင်း ရှီး ကျွတ်ကျွတ်”
လီးကြီးကို အရှိန်နှင့် ဆောင့်သွင်းလိုက်သဖြင့် မဝေဝေခိုင် တကိုယ်လုံး ဆတ်ကနဲ ကော့တက်သွားပြီး စောက်ဖုတ်အုံကြီး တစ်ခုလုံး ပူရှိန်းကျင်တက်သွားသည်။
ဆောင့်ချက်တွေက ပြင်းထန်သလောက် အလွန်ထိမိ ကောင်းမွန်သည်။ ကြာလေကောင်းလေ ကောင်းလေဆိမ့်လေမို့ မဝေဝေခိုင်၏ ရာဂမီးမှာ အားကြီးသထက် အားကြီးလာတော့သည်။ ကိုကိုမောင်၏ ပြင်းထန်သော ဆောင့်ချက်နှင့်အညီ သူမ၏ ဖင်ဆုံကြီးကို ကော့၍တမျိုး မြှောက်၍တဖုံ ဝိုက်၍တနည်း အခံကြီး ခံပေးနေသည်။
ကိုကိုမောင်က ဆုတ်ကိုင်ထားသော နို့ကြီးနှစ်လုံးကို လွှတ်ထားလိုက်ပြီး ခါးစပ်ကို မြဲမြဲတင်းတင်း ဆုတ်ကိုင်လျှက် ဒူးကိုအနည်းငယ် ညွှတ်ပြီး ပင့်ပင့်ထိုးပြန်၏။ ထိုသို့ ဒူးညွှတ်ပြီး ပင့်ဆောင့်လိုးလိုက်သောအခါ ပြူးတင်းမတ်တောင်နေသော စောက်စိငုတ် ညိုညိုကြီးကို အရှိန်နှင့် ဒလစပ် ပွတ်ထိုးနေသလိုဖြစ်သည့်အတွက် မဝေဝေခိုင် တစ်ယောက် အကောင်းလွန်ကာ ဖင်သားတွေ တဆတ်ဆတ်တုန်ခါနေ၏။
လေထဲတွင် မြောက်သွားသလို ခံစားလိုက်ရပြီး ထောပတ်မြစ်ထဲ အစိမ်ခံလိုက်ရသည့်နှယ် အီဆိမ့်သွားသည်။
“ကောင်း…. ကောင်းလိုက်တာကွာ…. အမလေးအရမ်းထိတာပဲ….. အင့်….. အ”
ဆောင့်ချက်တွေက မီးပွင့်ထွက်မလား အောက်မေ့ရအောင် သန်လွန်းမြန်လွန်းလှသည်။
မဝေဝေခိုင်ကလည်း အားကျမခံ ကော့၍ ကော့၍ ခံသည်။ တခေါင်းလုံးရမ်းခါလျှက် တဆတ်ဆတ်တုန်ကာ ငါးရံ့ပြာလူး ဖြစ်နေပါတော့သည်။ တင်ပါးခွက်ကြောကြီးတွေ ရှုံ့ခွက်၍ နောက်သို့ ပစ်ပစ်ခံနေသည်မှာ ကြောက်ဖွယ်လိလိ ကြက်သီးထစရာကြီးဖြစ်သည်။ မဝေဝေခိုင်လို မိန်းမမျိုးက တဏှာရာဂအားကြီး၏။ ရမ္မက်သွေးသားသောင်းကြမ်းသည်။ ထို့ကြောင့် သာမန်လီးကို ဖြုံလေ့မရှိ။
အခု ကိုကိုမောင့် လီးကြီးမှာ စံချိန်မှီရုံမျှမက လွန်၍ပင်နေတော့ သည်။ အလိုးအဆောင့်အညှောင့်တွေကလည်း သန်မြန်ရုံမျှမက ကြမ်းလည်းကြမ်း၏။ မဝေဝေခိုင် အလွန်တောင့်တခဲ့ရသော လီးမျိုးကို အခုမှပင် ခံရတော့၏။
ကိုကိုမောင်က အောက်မှပင့်ထိုးပြီး လိုးနေရာမှ ပုံစံကို ပြောင်းလိုက်၏။ လီးတန်ကြီးကို ဒစ်အရင်းထိရောက်အောင် ထုတ်၏။ ပြီးမှ ခပ် ပြင်းပြင်းဆောင့်ဆောင့်လိုးသည်။ မဝေဝေခိုင် သံကုန်ညှစ်၍ အော်ဟစ်မိပါတော့၏။ အရှက်အကြောက်ဆိုတာလည်း လုံးဝမရှိတော့။ ပင်ကိုယ်အစွမ်း ဆေးအစွမ်း ကြောင့် ကိုကိုမောင့် ဆောင့်ချက်တွေကလည်း အံ့မခန်းပင်။
ကေသွယ်မိုး တစ်ယောက် စိတ်ကူးမျိုးစုံတို့ဖြင့် ကွန့်မြူးလျှက် ကိုကိုမောင်တို့ခြံထဲ ရောက်လာသည်။ နာရီကြည့်မိတော့ (၁၀)နာရီ (၃၀)မိနစ် ရှိနေပြီ။ ချိန်းထားတာက (၁၀)နာရီ အခု မိနစ်(၃၀) ပင်လွန်နေပြီဖြစ်၍ ကိုကိုမောင် ဒေါဖောင်းနေလောက်ရော့မည်။ ချော့နည်း တွေကိုလည်း စဉ်းစားလိုက်၏။
ကေသွယ်မိုးက ကိုကိုမောင် စောင့်နေလောက်ပြီအထင်နှင့် အိမ်ထဲမဝင်တော့ဘဲ သူတို့နှစ်ယောက် စာ ကျက်နေကျဖြစ်သည့် ပန်းစက္ကူရုံကြီးရှိရာသို့ တန်းသွားသည်။ စက္ကူပန်းပင်အောက် ရောက်တော့ ကိုကိုမောင် မရှိ စားပွဲပေါ်တွင် ဘာစာအုပ်မှမရှိ။ ပန်းခြောက်တွေက စားပွဲနှင့် ကုလားထိုင်ပေါ် တွင် ကျရောက်နေသည်ဖြစ်၍ ကိုကိုမောင် လုံးဝမလာသေးသည်မှာ သေချာသွားသည်။
စိတ်ထဲ ထူးဆန်းသလို အောက်မေ့မိသည်။ လွယ် အိတ်ကို စားပွဲပေါ် ပစ်ချလိုက်ပြီး အိမ်ကြီးဆီသို့ပြန်သွားသည်။ အဆင်သင့်ပွင့်နေသော နောက်ဖေးပေါက်မှ ဝင်ခဲ့၏။ ကိုကိုမောင်က အ ယပေါ်ထပ်မှာနေသဖြင့် လှေကားပေါ်တက်မည်အပြု လှေကားနှင့်ကပ်လျက်ရှိသော မဝေဝေခိုင် အခန်းထဲက ညီးညူလှုပ်ရှားသံတွေ ကြား လိုက်ရသည်။ အပေါ်ထပ်တက်မည့် ခြေလှမ်းတွေက တုန့်ကနဲရပ်ဆိုင်းသွားပြီး အခန်းနားသို့ တိုးကပ်လိုက်သည်။
အခန်းကို (၃)ထပ်သား အကောင်းစားဖြင့်ကာရံထားသည့်အတွက် အပေါက်မရှိအောင် လုံခြုံသည့်တိုင် အုတ်နံရံကဲ့သို့ ထူထူထဲထဲ မရှိရုံမျှမက လေဝင်လေထွက် ကောင်းအောင် အပေါ်ပိုင်းတွင် သံဇကာတွေတပ်ဆင်ထားသည့်အတွက် အခန်းတွင်းက အသံတွေမှာ အတိုင်းသားကြားနေရ၏။
စောစောက ဝင်လာကာစ ဗြုန်းကနဲမို့ မကြားမိသော်လည်း အသေအချာ နားထောင်လိုက်သောအခါ
“အား အ… ကောင်း… ကောင်းလိုက်တာကွာ… အမလေး…. ထိ…. ထိလိုက်တာ ဇွတ် ဗြိ အင့် အင့် အ…. ဆောင့်…. အမေ့…. နာ… နာဆောင့်…. အ….. မမပြီး… ပြီး…တော့မယ်… ဗြစ်….ဗြိ….ဗြစ်….ဒုတ်….ဗြစ်….ဒုတ်…..ဗြစ်….ဗြစ်….အမလေးး အား ဟား ကျွတ်….ဟုတ်….ဟုတ်ပြီ…..အင့်…အင့်….အ….”
စောက်ဖုတ်သံ၊ လီးသံ၊ ငြီးသံတွေက တခန်းလုံးဆူညံပွက်လောရိုက်နေ၏။ မောင်လေးဆိုသူမှာ ဘယ်သူ ဘယ်ဝါမှန်းမသိ။ ကိုကိုမောင့် မိထွေးဝမ်းကွဲ မဝေဝေခိုင်က ပွေမည့်ပွမ်မည့် ပုံစံကြီးမို့ သူ့ဦးလေးမရှိခိုက် တခြားကောင် တစ်ကောင်နှင့် ချိန်းတွယ်နေပုံရသည်။
“ နာနာဆောင့်…..ဟုတ်ပြီ….. ဟုတ်ပြီ….. အမလေး…. ကောင်း…. ကောင်းလိုက်တာ…”
“ ဖွတ်…. ဖွပ်…. ဖွတ်…. ပလွတ်…. ဗြစ်…. ဗြစ်…. ဒုတ်…. ဗြစ်…. ဒုတ်…. ပြစ်….. ဗြစ်”
“ အင်း….အမလေး….. ကောင်း…. ကောင်းတယ်… နာ….နာ….အင်.”
ကေသွယ်မိုး တစ်ယောက် ကိုကိုမောင့် အသံကိုကြားလိုက်ရသောအခါ တကိုယ်လုံး မိုးကြိုးအပြစ်ခံလိုက်ရသလို တုန်လှုပ်ချောက် ခြားသွား၏။ နှလုံးသားနုနုကို သောကအပူလုံးကြီးက ဒုန်းကနဲဝင်ဆောင့်သည်။ ပြာဝေမူးမိုက်သွား၏။ အခန်းနံရံကိုမှီ၍ မျက်လုံးကို မှိတ် ထားသည်။
နာကြည်းခံပြင်းစိတ်တွေက တရိပ်ရိပ်တက်လာသည်။ မာနတရားက ဦးနှောက်ထဲ ရောက်လာ၏။ ကေသွယ်မိုး အံကိုတင်း တင်းကြိတ်ရင်း ချာကနဲလှည့်ထွက်ခဲ့သည်။ ပေါင်ကြားရှိ စောက်ဖုတ်ထဲမှ စောက်ရေပူတချို့ ပြစ်ကနဲထွက်သွားခဲ့ပြီ။
ထွန်းထွန်း တစ်ယောက် အိမ်အပြင်ဖက်ရှိ ပက်လက် ကုလားထိုင်ပေါ်တွင် အပြာစာအုပ်တစ်အုပ်ကို အပျိုစင်မဂ္ဂဇင်းထဲညှပ်၍ ဇိမ်နှင့် ဖတ်နေစဉ် သူ့ကိုဖြတ်ကျော်သွားသော ကေသွယ်မိုးကို အနီးရောက်မှ မြင်လိုက်၏။ စောစောက လွယ်အိတ်နှင့် ထွက်သွားပြီး အခုလွယ် အိတ် ပြန်မပါ။
ပြီးတော့ မျက်နှာကလည်း နီမြန်းထူအန်းနေပြီး ငိုထားပုံရသည်။ ကေသွယ်မိုးက ငုတ်တုတ်ကြီးတွေ့နေရသော သူ့ကိုတောင် နှုတ်ဆက်မနေတော့ဘဲ အိမ်ထဲ တန်းဝင်သွားသည်။ ပုံစံက ရည်းစားပူမိလာသောပုံမျိုး ထွန်းထွန်း ပြုံးလိုက်သည်။ အပြာစာအုပ်ကို တောင် သိမ်းဆည်းဖို့ရာ သတိမထားမိတော့ဘဲ သည်အတိုင်း ညှပ်ခဲ့ပြီး ကေသွယ်မိုးနောက် ထလိုက်ခဲ့သည်။
သူ့အခန်းပေါက်ရောက်တော့ ခယ်မချောက ခေါင်းအုံးကို မျက်နှာအပ်၍ မှောက်ရက်ကြီး အိပ်နေ၏။ ထမီက ဒူးခေါင်းအထက်နားထိ ရောက်နေ၏။ ပေါင်တံတုတ်တုတ် နှစ်ချောင်းက ဘေးသို့ ခပ်ကားကား အနေအထား ဖြစ်သည်။ ဖြူဖွေးဝင်းမွတ်သော ခြေသလုံးသား ပြည့်ပြည့်လေးက စွဲမက်စရာ ကောင်းလှသည်။ ဆူဖြိုးထွားတစ်သော ဖင်ဆုံကြီးက သိသိသာသာ ခုံးမောက်နေသည်။ မျက်နှာက တဖက်သို့ စောင်းထားသည်။ တချက် တချက် သိမ့်ကနဲ သိမ့်ကနဲတုန်ခါသွားသည့်အတွက် ငိုရှိုက်နေကြောင်း သိသာ၏။
ကိုကိုမောင့်ကို ဂလဲ့စားပြန်ချေချင်သည်။ သူလုပ်သလို လုပ်ပြချင်သည်။ မနက်က သူ့ကိုရမ္မက်ကြည့် ကြည့်ခဲ့သော ကိုထွန်းပုံရိပ်ကို မြင်ယောင်လာ၏။ အဆင်သင့်ပင် ကိုထွန်းတစ်ယောက်လုံး ရှိနေပြီ။ မိန်းမကျမ်းကျေပြီးဖြစ်သော အိမ်ထောင်သည်ယောက်ျားတစ် ယောက်မို့ အထူးမြူဆွယ်စရာပင် လိုမည်မထင်တော့။
မနက်က သူ့ကိုကြည့်သော အကြည့်တွေက လိုးချင်လို့ကြည့်မှန်း ကေသွယ်မိုး အတတ်သိသည်။ တွေ့ကြုံရမည့် အရေးအခင်းအတွက် ရင်ခုန်လှုပ်ရှားနေ၏။ ကိုကိုမောင်ကို ကောင်းကောင်းကြီး ဂလဲ့စား ချေရတော့မည်မို့ အကျေနပ်ကြီး ကျေနပ်နေသည်။
မနက်ကတည်းက ခယ်မဖြစ်သူကို ကြည့်ပြီး လီးတွေတောင် စိတ်တွေထခဲ့ရသော ကိုထွန်း တစ်ယောက် သူ့ယောက္ခမတွေ မရှိမှန်းသိ၍ ညမှ မီးစင်ကြည့်ဖြုတ်မည်ဟု ကြံစည်ထားရာ အခုတော့ ကာမပွဲတော်အုပ်ကြီးက သူ့ရှေ့မှောက်သို့ တည့်တည့်ကြီး ရောက်လာပြီ။
တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ပင် အပြာဇာတ်လမ်းကလည်း ခယ်မနှင့်ခဲအို ဇာတ်လမ်း။ ကိုထွန်း တစ်ယောက် ခုတင်ဘေးတွင် မတ်တပ်ရပ်ရင်း ခယ်မဖြစ်သူ၏ ဆူဖြိုးကျစ်လစ်သော ကိုယ်လုံးကြီးကို စူးစူးစိုက်စိုက်ကြည့်ရင်း ဘယ်ပုံခင်းကျင်းရမည်ကို အကွက်ချစဉ်းစားနေသည်။ ရာဂမီး တောင်ကလည်း တဝုန်းဝုန်း ပေါက်ကွဲနေသည်။
အိပ်ချင်ယောင်ဆောင်နေသော ကေသွယ်မိုးကလည်း ယခုအချိန်ထိ မလှုပ်ရှားသေးသည့်အတွက် အားမလို အားမရ ဖြစ်နေရှာသည်။ စောက်ခေါင်းအတွင်းက လှိုက်ကနဲ လှိုက်ကနဲ လှုပ်ရွနေသလို ဖင်ဖျားတွေလည်း တဆတ်ဆတ်တုန်နေ၏။ ထွန်းထွန်းက အစီအစဉ်ချ မှတ်လိုက်ပြီးဖြစ်၍ ပုဆိုးကို ချွတ်ချလိုက်သည်။ လမွှေးအုံ မဲမဲအုပ်အုပ်ကြားမှ ထိုးထောင်ထွက်နေသော လီးတန်ကြီးမှာ မာကျောကျစ် တောက်နေ၏။ ထွားကြိုင်းသော အသွင်ထက် ကြီးမားကျစ်လစ်သော အသွင်ကိုဆောင်နေသည်။
လုံးပတ် (၄)လက်မ အရှည်(၆)လက်မခွဲရှိ လီးတန်ကြီးမှာ သွေးကြောကြီးတွေ ဖောင်းထလျှက် ငေါက်ကနဲ ငေါက်ကနဲ တောင်မတ်နေ၏။ ကိုထွန်းက ခြေထောက်နှစ်ချောင်းကို ဆွဲလျှက် ကန့်လန့်ဖြတ်အနေအထားဖြစ်အောင် လုပ်လိုက်သည်။ ကန့်လန့်ဖြတ်အနေအထားအ ရောက်တွင် ကေသွယ်မိုးကလည်း ဗြုံးကနဲ ပက်လက်လှန်ချလိုက်သည်။ အံ့သြထိတ်လန့်သော အမူအယာနှင့်
ကေသွယ်မိုး စကားပင် ဆုံးအောင် မပြောလိုက်ရ ကိုထွန်းက ထမီကိုဆွဲလှန်ပြီး ပေါင်နှစ်ချောင်းကိုဖြဲလျှက် ရင်ဘတ်ဆီဖိတွန်းလိုက် သည်။ ဖင်အုံဖွေးဖွေးကြီးက ခုတင်စောင်းနှင့် အံကျကွက်တိဖြစ်နေ၏။ ခြေထောက်နှစ်ချောင်းကို လက်တစ်ဖက်ဖြင့် ထိန်းပေးရင်း ကျန် လက်တစ်ဖက်က သူ့လီးတန်ကြီးကို ဆုတ်ကိုင်ကာ ဖောင်းကြွပြဲလန်နေသော စောက်ဖုတ်ကြီးထဲသို့ တရှိန်ထိုးသွင်းထည့်လိုက်သည်။ လိုး နေကျမို့ လီးက ဟိုချော် ဒီချော်လုံးဝမဖြစ်ဘဲ တန်းတန်းမတ်မတ်ကြီးဝင်သွား၏။
“အီး အမလေး အား အား… သေ…. သေတော့မယ်…. အမေ အား အမလေး….. အမလေး”
တုတ်ခိုင်ရှည်လျားပြီး မာကျောသော လီးတန်ကြီးက တရှိန်ထိုးဝင်လာသည့်အတွက် စောက်ဖုတ်အုံတခုလုံး ဖြိုးကနဲ ဖျင်းကနဲ ကျင် ကနဲ ဆိမ့်ကနဲဖြစ်သွား၏။ ပေါင်တန် ဖွေးဖွေး တုတ်တုတ်ကြီးမှာလည်း ဘေးသို့ အစွမ်းကုန် ကားထွက်သွား၏။ ကျေနပ်ခြင်း အားရခြင်း နာ ကျင်ခြင်းဝေဒနာတွေကို တပြိုင်တည်း ခံစားလိုက်ရသည်။ နှုတ်ခမ်းကိုလည်း တင်းနေအောင် ကိုက်ထားလိုက်မိသည်။
စောက်ရေတွေက စိုရွှဲနေပြီဖြစ်ရာ နာကျင်သည့်တိုင် အလွန်ကောင်းနေ၏။ ကိုထွန်းက ဆီးခုံချင်း ထိကပ်သည်အထိ ဖိသွင်းထားရာမှ ပြန်ဆွဲနှုတ်သည်။ စောက်ရေတွေက စိုရွှဲနေပြီဖြစ်၍ အဆောင့်ဒဏ်ကို ခံနိုင်နေပြီဖြစ်ကြောင်း သိလိုက်သည်။ ထို့ကြောင့် ရှေ့ကိုကုန်း၍ ကေသွယ်မိုး ချိုင်းနှစ်ဖက်အတွင်း သူ့လက်ကို လျှိုသွင်းကာ ပခုံးသားနှစ်ဖက်ကို ခပ်တင်းတင်း ဆုတ်ဖက်လိုက်သည်။ ထို့နောက် အသား ကုန် ကြုံး၍ ဆောင့်တော့သည်။
“ ဖွတ်…. ပြစ်…. ဗြစ်…. ဖွတ်…. ဗြစ်…. ဗြစ်…. ဒုတ်…. ဖွတ်… ဗြစ်”
“အား အား အမလေး….. အား….. ကျွတ် ကျွတ်…..”
ကေသွယ်မိုး တစ်ယောက် ပါးစပ်က တအားအားအော်ဟစ်ရင်း နာကောင်းလှသော ကာမအရသာထူးကြီးကို မျက်လုံးစုံမှိတ်ရင်း အံ ကြိတ်ခံသည်။ ဆောင့်ချက်တွေက အရပ်အနားမရှိ ပြင်းထန်လှသည်။ စစ်ဦးကို ဒလကြမ်းဖြိုသောနည်းဖြစ်သည်။
ကြာကြာစိမ် လိုးနိုင်သူမှသာ ဤနည်းဗျူဟာကို သုံးသင့်သည်။ လရေထွက်လွယ်သူတို့ ဤနည်းကို သုံးလျှင် ဗုံးဗုံးလဲကျ ရှုံးတတ်သည်။ ထိုအခါ မိန်းမဖြစ်သူ၏ အထင်သေးခြင်းကို ခံရတတ်၏။ ထို့နောက် တစ်သက်လုံး လင်နိုင် မိန်းမဘွဲ့ကို ယူတော့သည်။ နှစ်ယောက်သား စည်းချက်ညီညီ လိုးနေကြစဉ်…
ကိုကိုမောင် တစ်ယောက် မဝေဝေခိုင်ကို (၃)ချီတိုင်တိုင် အားရအောင်လိုးပြီးနောက် မဝေဝေခိုင် ဖလပ်ပြသွားသည့်အတွက် ရပ်နား လိုက်သည်။ သည်တော့မှ ကေသွယ်မိုးနှင့် စာအတူကျက်ရန် ချိန်းထားသည်ကို သတိရ၏။ ပက်လက်ကြီးမှိန်းနေသော မဝေဝေခိုင်ကို ထားခဲ့၍ ပုဆိုးကပျာကယာဝတ်ကာ စာကျက်နေကျ ပန်းစက္ကူရုံသို့ အသော့ကလေးထွက်ခဲ့သည်။
ကေသွယ်မိုး ‘လွယ်အိတ်ကလေး’ က စားပွဲခုံပေါ်ရောက်နေ၏။ ဟိုဟိုဒီဒီရှာကြည့်သည် မတွေ့။ အိမ်ထဲပြန်ဝင်သည်။ ဘာအရိပ်အရောင်မှ မတွေ့။ ဟား…. သွားပြီ သူနှင့် မဝေဝေခိုင်တို့ လိုးနေတာကို ကေသွယ်မိုး သိသွားပြီ။ ကိုကိုမောင် နောင်တအကြီးအကျယ် ရသွားသည်။
ပန်းစက္ကူရုံသို့ အပြေးတပိုင်းနှင့် သွား၏။ ကေသွယ်မိုး လွယ်အိတ်ကလေးကို ကောက်လွယ်လျှက် ကေသွယ်မိုး အိမ်ဖက်ထွက်ခဲ့သည်။ ကျေနပ်သည်အထိ ချော့ရပေတော့မည်။ ကေသွယ်မိုးတို့အိမ်မှာ လူသူအရိပ်အယောင်ကင်းမဲ့ တိတ်ဆိတ်နေသည်။ လူကြီးတွေလည်း ရှိပုံမရ။
စိတ်ထဲပူသွားသည်။ နာကြည်း ချက်ကြောင့် ကြိုးဆွဲချသေနေမှဖြင့် တစ်သက်လုံး ယူကြုံးမရဖြစ်ရတော့မည်။ ပက်လက်ကုလားထိုင်ပေါ်တွင် မဂ္ဂဇင်းတစ်အုပ်တွေ့ခဲ့ သည်။ ကောက်မကြည့်နိုင်ဘဲ အိမ်ထဲဝင်လာခဲ့သည်။ ကေသွယ်မိုး အခန်းဆီသို့ ချဉ်းကပ်လိုက်သည်။ အခန်းနား အရောက်တွင်….
“ အင်း…. အင်း….. အမလေး…. ကောင်း…. ကောင်းတယ်….. ကိုထွန်း…. အမလေး….. ဆောင့်…. ဆောင့်…. နာ… နာဆောင့်…… အင့်…… အ…. ကျွတ်…. ကျွတ်…..”
ကြားလိုက်ရသော အသံက ကိုကိုမောင့် ရင်ဝကို လှံအစင်းပေါင်း တစ်ရာနှင့် တစ်ချက်တည်း အထိုးခံလိုက်ရသလို စူးနစ်ပူအောင့်သွား ၏။ ကေသွယ်မိုး အခန်းက ထရံနှင့်ကာထားသည်မို့ ချောင်းကြည့်စရာ အပေါက်ကလေးတွေ ရှိနိုင်သည်။
သို့သော် မင်းသား မင်းသမီးပုံတွေ အပြည့်နီးပါးကပ်ထားသဖြင့် အပေါက်ကိုမတွေ့ဘဲဖြစ်နေသည်။ ကံကောင်းထောက်မစွာပင် ထောင့်စွန်းတစ်ခု ကွာပြဲနေသော နေရာမှ အတွင်းသို့ ချောင်းကြည့်လိုက်သည်။ ကေသွယ်မိုး တစ်ယောက် ခုတင်ပေါ်တွင် အဝတ်အစား လုံးဝမရှိဘဲ ဒူးထောင်ပေါင်ကားအနေအထားဖြင့် ပက်လက်ကြီးအလိုးခံကာ ဒူးထောက်လျှက် လိုးပေးနေသော သူ့ခဲအို၏ခါးကို တင်းကျစ်နေအောင် ဖက်ထားသည်ကို ဘွားကနဲ မြင်လိုက်ရ၏။
“ အား…. အမလေး….. ကောင်းလိုက်တာ ကိုထွန်းရယ်….. ညလည်း အခုလို လိုးပေးအုံးနော်”
“ အေးပါကွာ…. စိတ်ချ”
ကိုကိုမောင့် မျက်လုံးတွေ ပြာဝေသွား၏။ ရင်ထဲနာကျင်စူးအောင့်သွားသည်။ အသာလေးအခန်းနားက ခွာခဲ့သည်။ ပက်လက်ကုလား ထိုင်နားရောက်သောအခါ မဂ္ဂဇင်းစာအုပ်ကို လှန်ကြည့်သည်။
အပြာစာအုပ်တစ်အုပ် ထွက်လာ၏။ အပြာစာအုပ်ကို မဂ္ဂဇင်းပေါ်တင်လျှက် ထိုအပေါ်မှ ကေသွယ်မိုး လွယ်အိတ်ကလေးကို တင်လိုက်သည်။ ထို့နောက် နှေးကွေးသော ခြေလှမ်းတို့ဖြင့် ထွက်ခဲ့၏။
နှစ်ယောက်သား လိုးအားရသောအခါ အဝတ်အစားများပြန်ဝတ်၍ အပြင်ထွက်ခဲ့ကြသည်။ ကိုထွန်းလည်း မြို့ထဲသွားမည်ဟုဆိုကာ ထွက်သွား၏။
ပက်လက်ကုလားထိုင်ပေါ်မှာ ထိုင်မည်အပြု သူမ လွယ်အိတ်ကလေးကို တွေ့လိုက်ရသည့်အတွက် နှလုံးသွေးတွေ ချောက်ခြားမတတ် ထိတ်လန့်သွား၏။ ပန်းစက္ကူပင်အောက်မှာ သူမ မေ့ကျန်ခဲ့သော “ လွယ်အိတ်ကလေး ” ။
ဖတ်ရှုကြိမ် စုစုပေါင်း : 12,039
← လိုချင်ရင် ပြန်တော့ပေးရတယ်
မဖြစ်နိုင်ပါဘူး ကိုကြီးရယ် →